ख़तरनाक हुनसक्छ मोबाइलमा पोर्न हेर्नु, ध्यान दिनुस यी कुरामा - Everest Dainik - News from Nepal
ख़तरनाक हुनसक्छ मोबाइलमा पोर्न हेर्नु, ध्यान दिनुस यी कुरामा
२०७४, २६ पुष बुधबार
विभिन्न अध्ययनहरुले देखाईरहेका छन् कि इन्टरनेट पोर्न हेर्ने मानिसहरुको संख्या उच्च छ । सबैको हात हातमा सहज तरिकाले उपलब्ध हुने मोबाईल फोन हो, त्यो पनि अहिलेको समयमा स्मार्टफोन नबोक्ने त कमै होलान् ।
हातमा मोबाईल, अनि ईन्टरनेटको पहुँच पनि छ भने युवा युवतीलाई पोर्न फिल्म हेर्नबाट रोक्ने कसले ? हुनत त्यो तपाईको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो तर पनि एन्ड्रोईड स्मार्टफोनबाट इन्टरनेट पोर्न हेर्दा सावधान भने हुनुपर्छ ।
याे पनि पढ्नुस यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् पोर्न चलचित्र हेर्दा !
– पोर्न साइटमा तपाइँको डिभाइसलाई लक गरिदिने र अनलक गर्न फिरौति माग्ने भाईरस पनि हुन्छन । यदि एक पटक मात्र पनि तपाई त्यसमा फस्नुभयो भने तपाईको डाटा ह्याकरको हातमा पुग्छ । अब ह्याकरले फिरोती लिएपछि डिभाईस अनलक गरेर डाटा गरिदिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन ।
– लोकप्रिय पोर्न वेबसाइटहरुले गैरकानूनी रुपमा तपाईको मोबाईलबाट पैसा काट्दछन् । जब तपाइँ स्मार्टफोनमा कुनै वेबसाईट खोल्नुहुन्छ त्यो समयमा भ्यालु एडेड सब्सक्रिप्सन गोप्य रुपमा आफै एक्टिभेट हुनसक्छ । राशिफल, ड्रिम गर्ल प्याक जस्ता सब्सक्रिप्सन आफै एक्टिभेट हुन्छन् । यस्ता सर्भिसले दिनगन्ती अथवा महिनावारी हिसाबमा तपाइँको मोबाइलको पैसा काट्दछन् ।
– आफ्नो मुख्य जिमेल आईडी लगईन गर्ने स्मार्टफोनबाट पोर्न हेर्दा ह्याकरहरुले तपाइँको स्मार्टफोनको सुरक्षा तथा गोपनीयतामा दरार ल्याउन सक्छन ।
– भाईरस डाउनलोड हुने समस्या हुन्छ । यदि तपाइँले एन्ड्रोइड मोबाइलमा पोर्न हेर्नुभयो र प्ले स्टोरबाट लोकप्रिय गेम्स डाउनलोड गर्नुभयो भने पोर्न टिकर (एपको नक्कल रुप तर सक्कल जस्तै देखिने) आँफै पपुलर गेम्सको रुपमा नक्कली पेश गरिदिन्छ । अनि स्मार्टफोनमा भाइरस डाउनलोड हुन्छ ।
नेपालका प्रधानसेनापतिलाई ‘स्वागत गरेपछि’ अमेरिकाले के भन्यो?
चट्याङ लागेर एक किशोरीको मृत्यु
बाग्मतीमा सरकार परिवर्तनले अन्य प्रदेशमा पनि असर पर्ने माधव नेपालको संकेत
छानवीन समितिको निश्कर्षः मर्यादा बिर्सेर एकराजको घर पस्नु विमलाको गल्ती
अभिनेता राजपाल यादवविरुद्ध नोटिस जारी, २० लाख ठगेको आरोप
सत्ता, शक्ति, पद प्राप्तिको बार्गेनिङमा लागेको भन्दै वामदेव गौतम नयाँ पार्टीबाट निष्कासित
भरतपुर महानगरपालिका सबै क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्छ : मेयर रेनु दाहाल
महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत